Mpikambana Enina Aminà Bilaogy Itambaram-be Nosamborina Tao Etiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2014 13:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Deutsch, فارسی, Français, Português, English
Tamin'ny 25 Aprily, mpikambana enina avy amin'ny bilaogy itambaram-be “Zone Nine” [am] no nosamborina tao Etiopia. Nitatitra ireo mpiara-dia amin-dry zareo fa ao Maekelawi, toby fitànana ao Addis Abeba, renivohitra izy ireo no nahiboka.
Indrisy, tsy voalohany amin'ny toa azy akory ireo fisamborana ireo. Any amin'ny manodidina an'i Addis Abeba, misy fonja iray goavana antsoina hoe Kality izay itazonana gadra politika maro amin'izao fotoana izao, isan'izy ireny ireto mpanao gazety ireto: Eskinder Nega sy Reeyot Alemu. Nilaza betsaka taminay mikasika ilay fonja sy ny fiaimpiainana ao ireo mpanao gazety. Mizara ho faritra valo samihafa i Kality, ny farany amin'izany — Zone Eight — dia natokana ho an'ireo mpanao gazety, ireo mpikatroka mafàna fo mpiaro zon'olombelona ary ny mpanohitra. Rehefa tafaraka izahay, nanapa-kevitra ny hanangana bilaogy iray ho kisarinteny mikasika ilay fonja hiainan'ny Etiopiana rehetra: ny Zone Nine io.